Po Zaw – Burmese Worship Suu ? | MoeMaKa Burmese News & Media
Po Zaw – Burmese Worship Suu ?
သားတို့ ချစ်တဲ့ အမေစု ကျန်းမာပါစေ..
သမီးတို့ ချစ်တဲ့ အမေစု ကျန်းမာပါစေ..
တို့ အားလုံးချစ်တဲ့အမေစု ကျန်းမာပါစေ…
ဆိုပြီး သီချင်းသံတွေ နဲ့ မြိုင်နေတဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့Resorts World Sentosa Ballroom RWS ခန်းမကြီးကို ၀င်လိုက်ြ့ပီး အမေစုရဲ့ ပုံနောက်ခံနဲ့ စင်မြင့်ကြီးကို ကြည့် လိုက်ရတော့ မနက် ငါးနာရီထပြီး လာခဲ့ရတဲ့အတွက် အိပ်ရေးမ၀တ၀ ဖြစ်နေရာကနေ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အတော့်ကို လန်းဆန်းသွားပါတယ်။
ရှေ့ ဆုံးနားရောက်အောင် ခြောက်နာရီလောက် အရောက် စောစောလာခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်ရှေ့ မှာ လူနှစ်ရာကျော်လောက် ရောက်နှင့်နေတာကို တွေ့ ရတယ်။ တချို့ တွေ နံနက် ၄ နာရီ လောက်ကတည်းက ရောက်နေကြတယ်လို့ လည်း ကြားရတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ အမျိုးသားတွေ အတော်များများဟာ ပင်နီတိုက်ပုံ ကချင်လုံချည် တွေနဲ့ရင်ဘတ်မှာ NLD တံဆိပ်၊ အမေစုပုံ ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ရင်ထိုးတွေနဲ့ တွေ့ ရတယ်။ ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ တွေနဲ့ လည်း တွေ့ ရတယ်။ အမေစုပုံတီရှပ်တွေနဲ့ လူငယ်ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေကိုလည်းတွေ့ ရတယ်။ အမျိုးသမီးလေးတွေ အချို့ ကလည်းပါးမှာ NLD တံဆိပ်ကို ဆေးခြယ်သထားကြတယ်။ အဲဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကြားမှာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စလုံးမှာ ဆိုတာကိုတောင် မေ့နေမိတယ်။
ဒီလို မြန်မာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပွဲ၊ အထူးသဖြင့် အမေစုအတွက်လုပ်တဲ့ ပွဲ ကို
ခမ်းခမ်းနားနား စည်စည်ကားကား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျင်းပခွင့်ပေးတဲ့
စင်ကာပူအစိုးရ၊ ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ မြန်မာကလပ်နဲ့ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့
မြန်မာအဖွဲ့ အစည်းများကို ရင်ထဲကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အမေစုကိုပထမဆုံးတွေ့ ရမယ့် အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ် ၁၉၈၈ ရွှေတိဂုံခြေရင်းကအမေစုရဲ့ ပထမဆုံးလူထုတရားပွဲ လုပ်တော့ ကိုယ့်အဖေတွေ ဘကြီးတွေ ဦးလေးတွေ တက်တက်ကြွကြွ သွားရောက်နားထောင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတာကို သွားသတိရမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက အဖေ့ရဲ့ တက်ကြွမှုမျိုး နဲ့ ပဲ ဒီနေ့ ကျွန်တော် အမေစုစကားပြောမှာကို လာရောက်နားထောင်နေပါလား၊
နားထောင်တဲ့ပရိသတ်ကတော့ မျိုးဆက်တစ်ခုပြောင်းလဲသွားပြီ။ အမေစုကတော့ ဆက်လက်ပြီး ဒီတာဝန်ကြီးကိုထမ်းဆောင်နေတုန်းပါလား လို့တွေးမိပြီး ကြက်သီးများလည်းထမိ၊ မျက်ရည်များလည်းစို့ မိပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဒီပဲယင်းအဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှု အတော်များများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီပဲယင်းအမှတ်တရ ဆွမ်းကျွေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အမှတ်တရ လွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲ၊ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်းပွဲ၊ဆွေးနွေးပွဲ များ၊ နာဂစ်ဘေး ကူညီရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ Vote No လှုပ်ရှားမှု များကို တင်းကြပ်လှတဲ့ စင်ကာပူ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရဲ့ ဘောင်နှုတ်ခမ်းဖျားကနေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိုမိုပွင့်လင်းလာတာနဲ့ အမျှ နိုင်ငံနဲ့စာပေအကျိုး ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့ အစည်းများ စင်ကာပူမှာ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ အခုစင်ကာပူကို အရင်ကအိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးတဲ့ စင်ကာပူအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာမယ်လို့ ဆိုတဲ့ အခါကြတော့ စင်ကာပူက မြန်မာမိသားစုနဲ့ တွေ့ ဆုံပွဲ ကို မြန်မာကလပ်က ဦးစီးကျင်းပပေးမယ် လို့ ကြားရတယ်။
မြန်မာကလပ်ဟာ ယခင်စစ်အစိုးရခေတ် အခွန်ကောက်မြန်မာသံရုံးအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နီးစပ်တယ်ဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ တွေက ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြဖူးတော့ အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပွဲကို မြန်မာကလပ်ဦးစီးမှာကို တချို့ အဖွဲ့ တွေက သဘောမတွေ့ ဖြစ်ကြတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်မှာလဲဆိုတော့ လူ ၁၇၀၀ ၀န်းကျင်လောက်သာ ဆံ့တဲ့ တက္ကသိုလ်က ခန်းမမှာ ဆိုတော့ မကျေနပ်သံတွေ ဆူဆူညံညံထွက်လာတယ်။ တူတာတွေကိုတွဲလုပ်ဆိုတဲ့မူနဲ့အခြားအဖွဲ့ အစည်းတွေ ဟာ မြန်မာကလပ်နဲ့ ညှိုနှိုင်းပြီး လူ ပိုမိုဆန့်တဲ့ ခန်းမငှားနိုင်ဖို့ ကိစ္စ ဆွေးနွေးပြီး RWS ခန်းမကိုငှားရမ်းဖို့ အဆင်ပြေသွားပြီးတဲ့ နောက်၊ အမေစုနဲ့ တွေ့ ဆုံပွဲ ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာဖြစ်မြောက်ဖို့ အတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးငှာနနဲ့ အဆက်အသွယ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာကလပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ အခြားသောမြန်မာအဖွဲ့ အစည်းတွေ ကျရာနေရာကနေ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဟာ ညှိုနှိုင်းကြရမယ၊် အားလုံးလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ညီညွတ်ကြရမယ် ဆိုတဲ့ အမေ့စကားနားထောင်တဲ့ စင်ကာပူက အမေစုသားသမီးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှပါတယ်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပြောဆိုခွင့် ပိုရလာတာသာရှိပြီး အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ ဘာမှမရှိသေးတဲ့အမေစုအတွက် စိတ်ရောလူပါအပင်ပန်းခံ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာကလပ်အဖွဲ့ သားများကိုလည်း အခွင့်သာမှ လုပ်တယ်လို့ပြောမယ့်အစား အရင်က စိတ်ရှိပေမယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ မလုပ်ခဲ့ကြတာပဲလို့ တွေးပေးပြီး မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကို ဆက်လျှောက်မယ့်
အမေစုအတွက် နောင်တွဲလုပ်ရမယ့် ဘက်တော်သားအသစ်တွေဆိုပြီး ကြိုဆိုသင့်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အင်မတန် စည်းကမ်းဥပဒေ တင်းကြပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ အမေစုရောက်တဲ့နေ့ က သွားကြိုချင်ကြပေမယ့် လူစုလူဝေးနဲ့ ဆိုရင် အရေးယူခံရမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်။ မြန်မာ့အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုစိုးထွန်းက အမေစုရောက်မယ့် ချန်ဂီလေဆိပ် VIP ဆိုက်ရောက်ဆောင်က တာဝန်ကျလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကို သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး တော့ ကြိုမယ့်သူတွေစောင့်ဖို့ နေရာလေး သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။
နေရာမတွေ့ ရင်ဆက်သွယ်ဖို့ သူ့ ရဲ့ ဖုံးနံပါတ်ကိုပါထည့် သွင်းပြီး သူ့ facebook ကနေတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရော စိုးရိမ်နေကြသူတွေရော ၀မ်းသာအားရဖြစ်ကုန်ကြတယ်။
ကိုစိုးထွန်းကို “မင်းတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စက္ကန့်ပိုင်းလေး တွေ့ရဖို့ အလုပ်တွေ၊ ကျောင်းတွေက ခွင့်ယူပြီး တနေ့လုံး နီးပါး အချိန်ပေးရတာ ထိုက်တန်ရဲ့လား” လို့Channel News Asia မှ သတင်းထောက်က အလွတ်ဘဘောမျိုးမေးတော့သူက ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစွာနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့အတွက် သူရဲ့အချိန်တွေပေးထားတာ တစ်ရက်လား … တစ်လလား …တစ်နှစ်လား … နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ …။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကို တွေ့မြင်ရခြင်း၊ မမြင်ရခြင်းကို အဓိကမထားဘဲ လာရောက် ကြိုဆိုဖို့ အချိန်ပေးရတာ၊ သူ ပေးဆပ်နေတာနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှ ပြောလောက်စရာ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး …”လို့။
သတင်းထောက်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကတော့ စိတ်ကျေနပ်တဲ့ အရိပ်အယောင် အပြည့်နဲ့ ပြုံးလို့ တဲ့။
VIP ဆိုက်ရောက်ခန်းမဆောင်ကနေ အမေစုကိုကြိုလာတဲ့ကားထွက်လာတော့
ကြိုဆိုနေကြတဲ့သူတွေ နဲ့ မနီးမဝေးမှာ ခဏရပ်ပြီး လက်လှမ်းပြလိုက်တဲ့အခါ ကြိုနေတဲ့သူတွေထဲက
အမျိုးသမီးလေးတွေတော်တော်များများဟာ ပါးစပ်ကလည်း အမေစုကျန်းမာပါစေလို့ 
အော်ဟစ်ဆုတောင်းနေကြရင်းက သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာလည်း မျက်ရည်တွေရွှဲပြီး နီရဲကုန်တော့တယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုရင် လုပ်ကိုင်မှုလည်းမရှိ ဆွေးနွေးမှုလည်းမရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမျိုးသမီးတောင်
Facebook ကနေ အမေစုလာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ထားရကြည့်ထားရတော့ အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ဒီနေ့ အမေစုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အသိက ၀မ်းသာသလိုလို ၀မ်းနည်းသလိုလို ရင်ထဲ တမျိုးကြီးပဲလို့ထူးထူးခြားခြားလာပြောလေတယ်။ မေတ္တာဆိုတာ ကိုယ့်ကိုလာပေးရင် အငြင်းရခက်လှတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုလိုပဲ စင်ကာပူက မြန်မာတွေလည်း အမေစုရဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်တွေကို မျက်ရည်တစိုစိုနဲ့ 
အမေစုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲ နံနက်ခင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်တွေ့ ဆန်ဆန် စင်ကာပူနိုင်ငံသားခံယူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လည်းမြန်မာအမျိုးသားဝတ်စုံတွေနဲ့တွေ့ ရပြီး
ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ ရဲ့ မျက်နှာတွေဟာလည်း ဟန်ဆောင်မှုမရှိ
ရင်ထဲကလာတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါ။
အမေစုပုံနောက်ခံနဲ့ စင်မြင့်ပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ရိုးရာအကတွေကကြ ။ အမေစု ဟာ ဒီနိုင်ငံက ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ညစာစားပွဲ အတူတက်၊ သမ္မတနဲ့ တွေ့ ဆုံဖို့လည်း အစီအစဉ်တွေရှိတယ် ဆိုတာကြားသိရတော့၊ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ထဲ အမေစုဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်
အာဏာရှိသူ တစ်ယောက်လို့ထင်မှတ်မှားသွားပြီး တိုင်းပြည် ဒီနေရာ တိုးတက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိလ၊ဲ ဟိုနေရာက အရေးအခင်းတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေမေးတတ်ကြတယ်။
ဒီလိုမေးတာတွေ လုံးဝမှားတယ်လို့ လည်းမဆိုလိုပါ။ အမေစုကလည်း ဒီလို တိုးတက်ရေး
ပဋ္ဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ အမြဲပဲစိတ်အားထက်သန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သတိချပ်ရမှာက အမေစုဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အနိုင်ရရင်တောင် အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရမယ့် သမ္မတဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိသေးပါ။
အဲဒီစိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကိုယ့်မေးခွန်းအရွေးခံရ၊ မခံရတာထက်၊ ပါဝင်ဆင်နွှဲရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန်
ဆိုပြီး … “အမေစု ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ဖို့ နဲ့သူ့ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံပြင်ဆင်ရေးမှာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ထောက်ခံပါဝင်ရမလဲ …” ဆိုပြီး ပေးထားတဲ့မေးခွန်းလွှာစာရွက်မှာရေးပြီး ထည့်လိုက်တယ်။
“အမေစုက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာလုပ်ပေးမလဲ …”
“ကိုယ်လိုချင်တဲ့အခြေအနေတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးရမယ်” ဆိုတဲ့ စကား
အမေစု သမ္မတဖြစ်ရင်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်လေးရဲ့ စကားကို …
“ဒါဆို အမေစု သမ္မတဖြစ်အောင် အရင်ပြန်လာလုပ်ပေးလှည့်ဦး …” လို့ 
အရွှန်းဖောက်သလိုလို နဲ့ အလေးအနက်တိုက်တွန်းသွားတဲ့ စကားတွေအတိုင်းအခုအချိန်မှာ အမေစုကို ဘယ်လိုဝန်းရံရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ က စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။
အမေစုစင်ကာပူမှာ ပြောသွားတဲ့စကားတွေဟာ ကောင်းမွန်ထိမိလွန်းလှတာကြောင့်
အရင် ဗီဒီယိုခွေတွေကနေ ကြည့်ဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအိမ်ရှေ့ က တရားပွဲတွေကိုတောင် သတိသွားရနေမိတယ်။
ပွဲမစခင် မြန်မာကလပ်ရဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားတာဟာ အမေစုပြောတဲ့ အပေးအယူသဘောတရားလေးတွေပဲလို့ တွေးတောမိတယ်။
သူတို့လည်း စိတ်ထဲ တကယ်မပါဘဲနဲ့လူထင်ပေါ်ရုံ အခွင့်အရေးမျှော်ကိုးရုံနဲ့ တော့ အချိန်တိုအတွင်း ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ် မထင်ပါ။
ပွဲပြီးလို့ အပြင်ထွက်တော့ အပြင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ လုပ်အားပေးလူငယ်တစ်ယောက်
သူရဲ့သူငယ်ချင်းကို လှမ်းနှုတ်ဆက်ရင်း “ကိုယ်တို့ကတော့ ပွဲစကတည်းက ဒီနေရာမှာပဲ …” လို့ လှမ်းပြောလိုက်တာကိုကြားရတော့ ရင်ထဲ နင့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ရှက်မိတယ်။
သူတို့လို လူမျိုးတွေကတော့ အမေစုပြောတဲ့ အပေးသမားသက်သက်တွေပါလား … လို့ တွေးပြီး ဂုဏ်ယူမိတယ်။
အဲဒီနေ့က အမေ့စုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ကြတဲ့ မြန်မာတွေ ၆၀၀၀ နီးပါးရှိပေမယ့်
စိတ်တွေကတော့ တစ်စိတ်တည်းဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ချစ်တဲ့အမေစုကို သူတို့ ရဲ့သမ္မတအဖြစ်နဲ့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ မြင်ချင်တဲ့ စိတ်ကတော့ အားလုံးမှာတူညီစွာရှိနေကြတယ်။
သင်္ဘောမာလိန်မှူးတွေဟာ မြှုမှုန်ထုထဲ အမှောင်ထဲမှာ မီးပြတိုက်ကိုအားထားရသလိုပဲ ပြည်သူလူထုကလည်း အမေစုကိုဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းမှာ ယုံကြည်အားထားကြတယ်။
အင်မတန်သာယာလှပတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဟာဝိုင်ယီကမ်းခြေကနေ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို
လှမ်းကြည့်ရင်း အမှန်အတိုင်းရွေးချယ်ရရင် မြန်မာ့အလှ မြန်မာ့ဓလေ့တွေကြားထဲ မှာ ဒီမိုကရေစီ ခရီးအတွက် ရုန်းကန်နေထိုင်နေရတာကို ပိုမိုနှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ အမေစုဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုက သူတို့ ရဲ့ ရင်ထဲ အသည်းထဲကနေ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ချစ်ရသူပါ။
တစ်ချို့ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် လူထုက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုတွေ များလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် တန်းတူညီမျှခွင့်ပေးနိုင်မယ့် ဒီမိုကရေစီအစစ်အမှန်ကို လိုချင်ကိုးကွယ်မိတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ အဲဒီလိုရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ခရီးကြမ်းကို ငွေရတု တိုင်အောင် မိမိတို့ရှေ့ ကဦးဆောင်ပေးနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း
ခေါင်းဆောင်မြတ်ကို ချစ်မိ၊ အားထားမိ ကိုးကွယ်မိကြတယ်လို့ဆိုကြရင်လည်း မှားလိမ့်မည်တော့မထင်။
(ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ် အတွဲ – ၄၊ အမှတ် – ၁၆၄ မှ ဆရာဖိုးဇော်၏ သပြေနု၊ ငွေခရု၊ ဇေယျတုနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အမေစု ဆောင်းပါး)